Fandikana fepetra :: Mpamily enina amby roapolo voasambotra • AoRaha
Fandikana fepetra Mpamily enina amby roapolo voasambotra
Mitohy hatrany ny famaizana an’ireo mpamily sy mpamily mpanampy manao antsirambina ny fepetra hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19, eto Antananarivo. Taorian’ireo valo amby dimampolo nampidirina fonjakelin’ny polisy, ny marainan’ny alatsinainy, dia nahatratra enina amby roapolo indray ireo voasambotra, omaly hatramin’ny 3 ora tolakandro teto an-drenivohitra.
Nentina tany amin’ny biraon’ny polisy sy nampidirina fonjakely avy hatrany izy ireo. Nampidirina vala famonjana ny fiara telo ambin’ ny folo nampiasain’ireo mpamily ireo. Olona fitopolo tratra tsy nanao arovava kosa no voasazy nanao asa ho tombontsoan’ny daholobe toy ny famafana lalana, tamin’io tapak’andro omaly io.
Alefa mody, rehefa vita fanadihadiana sy notazonina tao amin’ny fonjakely nandritra ny 48 ora, ireo mpamily sy mpanampy azy tratra tsy manaraka ny fepetra. Voalaza fa mety ho fepetra na sazy hafa no homena an’ireo mpamily mamerin-keloka.
Zava-mahadomelina :: Rongony dimy amby roapolo gony saika halefa aty an-drenivohitra